कमाएपनि पैसा जोगाउन सक्नुभएन, यसो गर्नुहोस् – My Life Magazine
Home /कमाएपनि पैसा जोगाउन सक्नुभएन, यसो गर्नुहोस्
AwarenessOctober 2, 2019
कमाएपनि पैसा जोगाउन सक्नुभएन, यसो गर्नुहोस्
अग्रजले भन्ने गर्नुभएका शब्द याद आउँछ होला । कमाएर मात्र हुँदैन जमाउँनपनि सक्नुपर्छ । कमाउने अवशर र जोस जाँगर सँधै एकैनास हुँनै सक्दैन । मौकामा हिरा फोर्नु, हिरा फोरेर आएको कमाई जमाई राख्नु यो सबैका लागि जीवनको मुल मन्त्र हो । कमाएको बेला जमाउँन नसके बुढेसकाल वा अशक्त भएका बेला बेवारिसे बन्नुपर्ने हुन्छ । यसैले आजै सोच्नुहोस् । यी टिप्स फलो गर्न थाल्नुहोस् । फुर्मास गर्ने साथीलाई ट्याग सेयर गरेर सचेत गराउँनुहोस् ।
सिमित कमाइकाबीच प्राय मानिसहरुलाई परिवार चलाउनु पर्ने बाध्यता त छ । तपाईको व्यक्तिगत जीवनयापन गर्नलाई नै तपाईले कमाएको पैसा अपर्याप्त भएकोपनि हुन सक्छ । तर पहिलाको तुलनामा तपाईको रोजगारी वा व्यवसायमा तपाईले प्राप्त गर्ने रकम वढेपनि रकम नजोगिएर हैरान हुन भएको होला र कसरी पैसा जोगाउने भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने यो टिप्स तपाईलाई काम लाग्न सक्छ ।
उपहार योजनाबाट नलोभिनुस्। आफूलाई चाहिएको कुरा मात्र किन्नुस् । र आवश्यक परेको बेला मात्र किन्नुस् ।
एक सय रुपैयाँको सामान आधा दाममा किन्दै हुनुहुन्छ भने के कुरा सम्झनुस् भने तपाईँले ५० रुपैयाँ बचाउँदा त्यति नै रकम खर्च गरिरहनु भएको छ।
प्रलोभनबाट बच्नुस् कुनै पसल वा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने सूचना आउने इमेलबाट बाहिरिनुस् ।
खानपानको बजेटबारे ख्याल राख्नुस् खपत गर्ने सामान मात्र खरिद गर्नुस्।
सकेसम्म पैसाको प्रयोग गरेर सामान किन्नुस् कार्डको प्रयोगबाट वा डिजिटल रूपमा भुक्तानी गर्दा पैसा खर्च भए जस्तो नलाग्न सक्छ।
प्रयोग भइसकेका सामान किन्नुस् यो तपाईँको लागि सस्तो पर्न सक्छ र वातावरणीय हिसाबले उचित।
अनावश्यक कुरा बेच्नुस।
ब्रान्डेड सामाग्रीको साटो साधारण सामान किन्नुस्।
यी मन छुने कुराहरु ध्यान दिनुहोस् ।
आजको स-सानो बचतले भोलि तपाईलाई ठुल्ठुला आर्थिक भारबाट जोगाउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो कमाइबाट बचत गर्नुहोस् । तपाईं जति कमाउनुहुन्छ पहिला त्यसको हिसाब गर्नुस् र, आफ्नो आम्दानीबाट कति रुपैयाँ बचत गर्ने रु त्यो यकिन गर्नुहोस् । म यति रुपैयाँचाहीँ बचाउँछु भनेर तपाई लाग्नुभयो भने मात्रै तपाईंले फजुल खर्च कटौति गर्न सक्नुहुन्छ ।
पत्रपत्रिकामा राखेका खानेकुरा खानुहुन्छ ?…
चाउचाउ खानेहरु सावधान ! चाउचाउको…
किन हुन्छ मुखको क्यान्सर ?…
हिटर ताप्दा ध्यान दिनुहोस्
के तपाई हाई हिल लगाउनु…
मदिराले कलेजाेमा के असर गर्छ…
‘आँखा इन्फेक्सन’को समस्या बढ्दै, ध्यान…
बालबालिकालाई मोबाइल र टिभीबाट यसरी…
वायु प्रदूषणमा कसरी जोगाउने आँखा?
यी १२ लक्षण देखिए थाहापाउनुस्…